नेपाली कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले गरे बुल्दीखोलाको पुल उद्घाटन – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. नेपाली कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले गरे बुल्दीखोलाको पुल उद्घाटन – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
नेपाली कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले गरे बुल्दीखोलाको पुल उद्घाटन
तनहुँ । नेपाली कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आज(बिहीवार) तनहुँ ब्यास नगरपालिकास्थित बुल्दीखोलाको पुल उद्घाटन गरेका छन् । बुधवार उद्घाटन गर्न नपाएको उक्त पुल कांंग्रेस नेता पौडेलले बिहिवार उद्घाटन गरेका हुन् ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताले उद्घाटन समारोहमा बुधबार प्रहरीले गरेको व्यवहारको विरोधमा नाराबाजी समेत गरेका छन्।
तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा वडा नम्बर १, १० र ११ जोड्ने पुल उद्घाटन गर्न जाने क्रममा पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पुल उद्घाटनमा नेता पौडेल जाने भएपछि नेकपा तनहुँ र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले विरोध गरेको थियो । पुल उद्घाटन विवादमा परेसँगै प्रशासनले पुल उद्घाटनलाई रोक्न आग्रह गर्दै निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको थियो । निषेधाज्ञाका बावजुत पौडेल पुल उद्घाटन गर्न पुगेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर ३ घण्टापछि छाडेको थियो ।
युवा संघले विरोधका कार्यक्रमहरु तय गरेसँगै त्यसबाट हुने झडप रोक्न प्रशासनले बुधवार बिहान १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको December 3, 2020 December 3, 2020 206 Viewed